China Controller Board Fanontana vita pirinty sy fanamboarana Assembly | KAISHENG PCB
PCBFuture dia tompon'andraikitra amin'ny fivoriambe PCB iray manontolo amin'ny famokarana PCB, fividianana singa, fivoriambe SMT, amin'ny alàlan'ny fanangonana loaka, fanandramana ary fandefasana. Amin'ny maha-mpanamboatra fivoriambe elektronika antsika izay manome serivisy fivoriambe PCB, dia miantoka izahay fa maimaim-poana sy ambany ny vidiny ny vokatrao.
Sosona: 8 Layer PCB
Fitaovana fototra: Avo Tg FR-4
Fitaovana vy: HASL maimaim-poana Fomba famokarana: SMT + Sosona: PCB 8 sosona
Fitaovana fototra: High Tg FR-4 Fanamarinana: SGS, ISO, RoHS MOQ: Tsy misy MOQ
Karazana solder: Tsy misy firaka Serivisy tokana: PCB Manufacturing + Components + Assembly Fitsapana: Fitsapana 100% AOI / X-ray / Visual
Fanohanana ny Tehnolojia: Hizaha DFM (Volavola ho an'ny famokarana) maimaimpoana Karazana fivoriambe: SMT, THD, DIP Fenitra: IPC-a-610d
Teny lakile: Mponina PCB, mpanamboatra solosaina PCB, fivoriambe PCB mora vidy, Serivisy fivoriambe PCB, fizotry ny fivoriambe PCB
1. Afaka mamokatra fihodinana haingana isika hihaonana amin'ny fandefasana 24-ora ho an'ny PCB misy lafiny roa, 48 ora mandritra ny 4 ka hatramin'ny 8 ary 120-ora ho an'ny 10 layer na PCB avo kokoa. Izahay dia hitahiry ny fotoananao na ny vidinao ho anao hampihenana sy hahitana ny andraikitr'ireo mpamatsy maro tafiditra ao.
2. Manana fifehezana ny vidiny isaky ny fizotrany izahay mba hanomezana mpanjifa PCB vidiny ambany sy fivoriambe PCB ambany ..
3. Ny PCB avo lenta dia avy amin'ny akora fidintsika, ny fitaovana mandroso ampiasainay, ny fanaraha-maso arahinay, ny fitantanana mahay manara-dalàna ary ny matihanina rehetra ananantsika.
4. Manome serivisy PCB fihodinana haingana izahay ary valiny haingana amin'ny fanadihadiana PCB. Ho an'ny prototype PCB misy lafiny roa, manohana serivisy haingana 24 ora izahay.
Serivisy PCB fihodinana haingana
Valiny haingana amin'ny fanadihadiana PCB
Serivisy haingam-pandeha 24 ora
Fivoriambe PCB mora vidy
Ny tombony azo amin'ny fivoriamben'ny Volume PCB:
• Ny PCB mitokana rehetra dia fitsapana 100% (E-test, fitsapana Solderability, FQC ary sns).
• Manolora serivisy fanangonana PCB prototype ho an'ny fitsapana alohan'ny famokarana betsaka.
• Manomboha famokarana betsaka na manome famokarana fananganana PCB prototype fanindroany aorian'ny fandalovan'ny mpanjifa ny fitsapana rehetra.
• Fanaraha-maso AOI sy fizahana maso mandritra ny fivorian'ny PCB.
• Ampiasaina ny fizahana taratra X an'ny BGA sy ny fonosana sarotra hafa.
• Raha mahita olana amin'ny fivorian'ny fiangonana dia afaka mamaha azy ireo alohan'ny alàlan'ny fandefasana azy ireo injeniera efa za-draharaha.
• Manana ekipa za-draharaha tokoa izahay hamaha ny olan'ny fivoriambe rehetra ary handefa ireo PCB manana kalitao tsara ara-potoana aminao.
Tsy faritanay ny habetsan'ny baiko PCB. Azonao atao ny mamadika haingana ny Prototype PCB. Tsy maninona na ampahany fotsiny ny habetsany. Manome batch kely sy salantsalany ary baiko lehibe izahay.
Tsy vitan'ny hoe tsy manana takiana sy fetra amin'ny habetsany isika, fa na firy na firy ny filaminana, manome serivisy fanodinana PCB mora vidy sy haingana ary serivisy fivoriambe toy ny teo aloha izahay.
Noho ny fahaizan'ny famokarana, ny vidin'ny asa, ny vidin'ny fakana entana ary ny anton-javatra hafa, tsy manoro hevitra anao izahay hanangona PCB haingana any an-kafa. PCBFuture dia manana tombony miavaka amin'ny vidiny ambany, teknolojia famokarana faran'izay tsara, ary fandefasana ara-potoana.
Ny tanjona mitohy PCBFuture dia ny fanampiana ireo mpanjifantsika amin'ny famokarana ireo vokatra avo lenta miaraka amin'ny tombony mifaninana indrindra amin'ny indostrian'izy ireo. Mifandraisa azafadysales@pcbfuture.com ho an'ny tetikasanao manaraka.
Teo aloha: Fivorian'ny birao fanaraha-maso
Manaraka: Ems Pcb Assembly
Serivisy Flex PCB Assembly